Ileta yesiNgesi endala: yintoni, imbali, iimpawu kunye nokusetyenziswa ngokubanzi | Abadali be-Intanethi
ileta endala yesiNgesi
UNerea Morcillo | 04/05/2022 17:00 | Imithombo, Izibonelelo
Iifonti kunye noyilo lwazo luye lwavela, kanye njengoko imbali esiyaziyo yenze kwaye yavela ngendlela emangalisayo, njengokuba sifunda ijografi, kunye neefonti ezisibeka ngokokuzalwa okanye ukudala kwazo.
Kodwa kule posi asizanga kuthetha nawe malunga nejografi (nangona ngendlela ethile siza kuzifumana). Kule posi sikuzisela elinye ilizwe lefonti elinomdla, ngakumbi yochwethezo lwakudala lwesiNgesi okanye eyaziwa kuyilo njenge-blackletter. Ukuba awukayazi ukuba le fonti ibonelela ngantoni kunye nembali yayo, siyakumema ukuba usifunde ukuze wazi.
1 Ileta yesiNgesi yakudala: yintoni
1.2.2 Inkulungwane yamashumi amabini
2 imizekelo yohlobo oludala lwesiNgesi
2.1 IBharoni emnyama
2.2 UCharlotte omdala
2.3 i-cameo emnyama
3 Ii-Apps zokuzifumana
3.2 Iifonti kuGoogle
Ileta yesiNgesi yakudala: yintoni
Ileta yesiNgesi yakudala, eyaziwa kwihlabathi jikelele njengeblackletter, Luhlobo lochwethezo oluyinxalenye yamaqela amabini amakhulu ohlobo lweGothic.. Luyilo lokuchwetheza oluphawulwa ngokuthandwa kakhulu eNtshona kwaye lwalubaluleke kakhulu ngo-1150 ukuya kwinkulungwane ye-XNUMX.
Igama layo laliyilwe ukuze kungabikho kubhideka kuchwethezo lwesiNgesi esilwaziyo, kwaye kungenxa yokuba zinobuntu kwaye ziyiyile kangangokuba ziyaligcina elo cala lakudala nelimnyama naphi na apho baya khona. Ngelo xesha, Zikwaphawulwa kuba ukusetyenziswa kwazo kusekho, eneneni kukho amaziko okanye iinkampani abasebenzisa olu hlobo lweefonti zegothic kuba zidibanisa kakuhle kakhulu nento abafuna ukuyiveza.
Luyilo lokuchwetheza oluthi, ngokwasemzimbeni sinokuthi luqulunqwe yimivimbo engqingqwa. Yifonti etsala amehlo kakhulu.
Ngokuqhelekileyo ziqulethe i-ductus ye-calligraphic ngokufanelekileyo, efana nezo fonti zibhalwe ngesandla eziyilwe ngesandla kwaye zinobuchule ngakumbi. Inkalo eye yathetha lukhulu kumaqweqwe amaninzi eencwadi ezindala kunye neencyclopedia. Kuqheleke kakhulu ukubona ezi ntlobo zochwethezo zimelwe kolu hlobo lwesiqalelo, into etsala umdla omkhulu.
Nanjengoko iluyilo olufanelekileyo, iipowusta ezininzi okanye imiboniso bhanyabhanya ihlala ikhetha olu hlobo lwefonti. Luyilo oludibanisa kakuhle izihloko ezinkulu, nto leyo eyenza ukuba ababukeli bakwazi ukuyicacisa baze bayibone bekude kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngummangaliso wokuchwetheza ongakhange uphume kwisimbo.
Njengoko uza kubona ngezantsi, ngomnye wemithombo equlethe imbali eninzi ngaphakathi. Ukwenza oku, kufuneka sibuyele kwizinto zokuqala kunye nokukhula kwazo. Inkalo egxininiswe ngokweendlela zayo.
Ukuchwetheza kwesiNgesi esidala nako zazimela iicawa ezininzi zelo xesha, engoyena mntu uphambili kwiibhayibhile ezininzi. Kwaye ngenxa yesi sizathu, ngalo lonke ixesha sifumana incwadi endala, siyayixabisa kwaye siyibone le typography imelwe kuzo.
Yifonti engashiyi nto ifunekayo, equlathe iminyaka kunye neminyaka yembali kwaye inika umdla ukuba sikubonise yona kuba uya kuqonda ukusetyenziswa kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo obekuyinxalenye yokuvela kwayo. Ngaphandle koko, Ikwaqaqambisa abanye abalinganiswa abafana IGutenberg, ekusenokwenzeka ukuba sele uvile ngayo kwihlabathi loshicilelo kunye nendalo yokuchwetheza.
Ibali libuyela emva xa, emva kokudalwa, lasetyenziswa kwenye yeencwadi zokuqala ezashicilelwa, kwaye ezaziyinxalenye yeGutenberg. Ukuchwetheza kwesiNgesi esidala kwavela kumlinganiselo omkhulu eNtshona de kwaphakathi kwinkulungwane ye-XNUMX.
Kwiminyaka kamva, oko sikwaziyo njengokwahluka kwavela, kwaye namhlanje ngabona baphambili kumaqela abo, njengohlobo lokubhala oludumileyo lweFraktur. Ngelo xesha, ngoonobumba besiGoth babesetyenziswa rhoqo ukushicilela iiBhayibhile nezinye iindidi zeencwadi, de kwayiminyaka kamva iincwadana ezinemifanekiso namaphepha okuqala aprintwa ngolu hlobo lwamagama.
Iminyaka yadlula kwaye amaJamani enza ukuba le fonti ingabi yinto eqhelekileyo ekushicileleni, kuba ngokuqulatha imivumbo emikhulu nengqindilili kakhulu, yenza kwanzima kakhulu ukufunda kwaye ibingelokhetho lulungileyo ekufundeni. Kodwa yaqhubeka isetyenziswa kwada kwayinkulungwane yama-1920, xa ngo-XNUMX, emva kokuthandwa kwabayili abaninzi, bacinga ukuba olu hlobo lwefonti aluzange luhambelane neshumi leminyaka yangoku kwaye ke, baluthatha njengento yangoku nje.
Ukusetyenziswa kwayo kwaphinda kwenzeka emva kwexesha lamaNazi, xa uHitler wayibiza ngokutsha njengolwimi lwabantu. Ngoko ke umbhalo ngamnye kufuneka uqulathe olu hlobo lweefonti. Yile ndlela uFraktur owaziwayo wavela ngayo kwakhona, emva kokuchitha iminyaka emthunzini.
Okwangoku, olu hlobo loyilo lufumaneka kwiimveliso ezininzi esizidlayo kwaye esingaziqondi. Ukuba siqhubela phambili, uhlobo lwebhiya edumileyo yeCorona lusebenzise olu hlobo loyilo kwiileyibhile zebhiya, ngenjongo zinika uyilo oluphakathi lwexesha. Uyilo olungasoze luphume kwisitayile.
imizekelo yohlobo oludala lwesiNgesi
Ibharon emnyama ithathwa njengenye yezona ntlobo zikhethekileyo zohlobo lwakudala olumnyama kunye nenqanaba eliphezulu lobuhle kunye nokulula oko. iyenza ifonti enye. Inkangeleko yayo emnyama iyenza ibe yifonti etyebisayo kwaye inomtsalane.
Inkalo edibanisa kakuhle kakhulu kuyilo lwe medieval. Uninzi lwale fonti isebenzisa oonobumba abade abayilelwe ukusetyenziswa ngokufanelekileyo. Ukongezelela, iphinda ibonakaliswe ngokungafaniyo okukhulu kunokubonwa kwimivimbo yayo. Ezinye izibetho ezihamba ngaphantsi ukuya ngaphezulu.
Ngolunye lolona luhlu luyilayo nolukhethekileyo lokuchwetheza. Ithathwa njengefonti emnyama kodwa enomoya othile kunye nempembelelo evela kwiifonti zakudala zecalligraphic. Kufanelekile ukuba ukusetyenziswa kwayo kuya kusetyenziswa kwiitekisi ezinkulu, ezifuna ingqwalasela enkulu evela kumbukeli. Kuqheleke kakhulu ukuyibona imelwe kwiipowusta, kwaye uyilo lwayo nalo lusebenza ngendlela emangalisayo.
Yifonti oyifunayo ukuhombisa iiprojekthi zakho ngokukhawuleza nangokulula. Ukongeza, unayo kwibhokisi ephezulu kunye nebhokisi ephantsi, inkalo eyenza kube lula ukuyisebenzisa kwizicelo zayo.
Yifonti egqibelele kakhulu ngenxa yoyilo lwayo. Ukongeza, iyila kwaye iqulethe inkalo esebenza kakhulu kuyilo lwe tattoo. Ibonakala ngemivumbo kunye nokumila kweeleta, ezibonelela ngokubonakala okuphilayo.
Enyanisweni, olu hlobo lokubhala sele lusetyenzisiwe nakwiimpawu zempahla, eyenza ifonti yanamhlanje kwaye, ngexesha elifanayo, kunye nomoya othile weklasi kunye ne-gothic. Ngaphandle kwamathandabuzo, ifonti efanelekileyo kwabo banesibindi sokuyisebenzisa kwaye abafuni ukungabonwa.
IBlackhead yifonti emnyama equlathe iintsingiselo ezithile ezindala kunye neziqhelekileyo kunezinye ebesikubonise zona ngaphambili kolu luhlu. Uyilo lwayo luyijometri kwaye lukwaqulathe uyilo olunika umoya othile wakudala. enokunika yonke imisebenzi enokwenzeka kuyilo lwakho.
Ukongeza, uyilo lwayo luyenza ibe yifonti efanelekileyo ukuba isetyenziswe kokubini kumbhalo omkhulu nakumbhalo osebenzayo. Inkcukacha ekunzima ukufikelela kuyo ukuza kuthi ga ngoku ngenxa yokuba yifonti efundeka kakubi kakhulu. Ngokungathandabuzekiyo, iyilwe ngendlela emangalisayo xa iyonke.
Inokuba yeyona ndawo ikhangelweyo kwibhrawuza iyonke, xa ukhangela ifonti. Iqulethe ngaphezulu kwe-500 yeendlela ezahlukeneyo zefonti kunye noyilo. zonke, Ikwanayo noluhlu olubanzi lweendidi apho unokufumana ilungileyo ngamaxesha onke.
Ngaphandle kwamathandabuzo lolona khetho lugqibeleleyo lokutyebisa uyilo lwakho kwaye ngale ndlela, ukwazi ukufumana i-typography obuyifuna. Ukongeza, zonke zisimahla, kwaye izitayile ezahlukeneyo eziziquletheyo sele zibandakanyiwe ekukhutshelweni. Ungachithi ithuba lokujonga iphepha usebenzisa ikhonkco esinike lona.
Lolunye ukhetho olubalaseleyo kakhulu. iifonti zikaGoogle Inamawaka kunye namawaka eenketho ezahlukeneyo, bonke bakhululekile. Ukongeza, iqulethe ezinye ezithandwa kakhulu ezisetyenziswa ngokubanzi ngabaqulunqi kunye nabayili. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho onokuthi uluphose nokuba ube nalo ngokucofa nje kube kanye.
Ukongeza, ukukhuphela kulula kakhulu kwaye ukuba usebenza nezinye ii-applications ze-Adobe okanye izixhobo, ufakelo lwenziwa kwangoko, ukusukela oko ufaka ifonti kwisixhobo sakho. Indlela entsha yokusebenza.
Iileta zesiNgesi ezidala zisetyenzisiwe iminyaka, ziluhlobo lochwethezo oluphawulwa ngokuqulatha imbali eninzi kuyilo lwazo. Ukongeza, ziqulethe iintsapho ezininzi kunye neentsapho, ngoko ke ikhathalogu yabo ibanzi. Ukuba ukhangela i-intanethi, ungafumana amawaka kunye namawaka eenketho ezahlukeneyo, ezithi, phakathi kwazo, zigcine iinkcukacha ezifanayo kakhulu, umzekelo imivumbo, edla ngokuba ngqindilili.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga nolu hlobo lwefonti esele inefashoni kwezinye iibrendi esizaziyo namhlanje. Imbali ihlala itshintsha kodwa kukho imithombo ehlala ihleli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » ileta endala yesiNgesi